‘लाहुरी भैँसी’ कथामा सबाल्टर्न | चितवन पोष्ट
‘लाहुरी भैँसी’ कथामा सबाल्टर्न
प्रस्तुत समालोचना सांस्कृतिक अध्ययनको विषयसँग सम्बन्धित छ । सबाल्टर्न सांस्कृतिक अध्ययनको एक उपकरण हो । यो अहिलेको नवीन समालोचना पद्धतिसँग सम्बन्धित छ । यो लेख यही मान्यतामा आधारित छ । यसमा विषयपरिचयपछि सबाल्टर्नको सैद्धान्तिक पर्याधार प्रस्तुत गरी सबाल्टर्न चेतना पत्ता लगाउने प्रयास गरिएको छ ।
सबाल्टर्न वर्गीय, भाषिक, जातीय आदि आधारमा रहने गर्दछ । त्यसैले, सबाल्टर्नको प्रतिनिधित्व, पहिचान र चेतना स्थिति देखाउँदै निहित प्रतिरोधी चेतना स्पष्ट पार्नु यस समालोचनाको सार्थकता रहेको छ ।
वनमान्छेको हाँसो (कविता)
शब्दसूची : सर्वहारा, दमित सबाल्टर्न शक्ति, सत्ता, प्रतिरोधी, पहिचान, प्रतिनिधित्व, वर्गीय शक्तिशाली ।
लाहुरी भैँसी रमेश विकल (विसं १९८५–२०६५) द्वारा लिखित एक सामाजिक यथार्थवादी कथा हो । यो कथा ‘नयाँ सडकको गीत’ (२०१९) कथासङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ । यस कथामा नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गविभेद, असमानता, सामाजिक शोषणजस्ता कुरालाई समेटिएको छ । जनसामान्य तथा सोझा व्यक्तिमाथि शक्तिशाली सामन्तहरुले कसरी शोषण गर्छन् भन्ने कुरालाई यस कथामा देखाइएको छ ।
२. सैद्धान्तिक पर्याधार
सबाल्टर्न अध्ययन सांस्कृतिक अध्ययनको एक मह¤वपूर्ण पक्ष हो । सांस्कृतिक अध्ययनले संस्कृतिलाई परम्परागत रुपमा भन्दा भिन्न र व्यापकरुपमा ग्रहण गरेको हुन्छ । सांस्कृतिक अध्ययनले सामाजिक समुदायका सांस्कृतिक व्यवहारहरु र शक्ति वा सत्तासँग त्यसको सम्बन्धलाई जोडेर हेर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ (पाण्डेय, २०७० : १७५) । यसले व्यक्ति वा समाजको सांस्कृतिक व्यवहार र क्रियाकलापसँग शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । यसअन्तर्गत नारीवाद, जातीय अध्ययन, लैङ्गिक अध्ययन, शरीर राजनीति, उपभोक्तावादी संस्कृति, सबाल्टर्न आदि अनेक विषयको अध्ययन हुन्छ ।
सबाल्टर्नले शाब्दिकरुपमा अरुभन्दा तल परेको सीमान्तीकृत समुदायलाई बुझाउँछ । नेपालीमा सबाल्टर्नलाई बुझाउन अधीनस्थ, उत्पीडित, उपेक्षित, दमित, शोषित, सर्वहारा, किनारीकृत, सीमान्तीकृत, पहुँचविहीन, आवाजविहीनजस्ता शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि सबाल्र्टन नै बहुप्रचलित रहेको छ । खासगरी, सत्ता र शक्तिकेन्द्रमा पहँुच नभएको, पछाडि वा तल पारिएको र पर्न विवश बनाइएको वर्ग नै सबाल्टर्न हो । सबाल्टर्नले आमजनता, तल्लो वर्ग, सर्वसाधारण, भुइँमान्छेलाई बोध गराउँछ । गरिब, किसान, मजदुर, दास, सेवक, महिला, तेस्रोलिङ्गी, गाउँले, जनजाति, दलित, उपेक्षित, निरक्षर, पीडित, दुर्गमको बासिन्दा, हरेक कोणबाट पहिचानमा रहन नसकेको समूहलाई सबाल्टर्नका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सबाल्टर्न देश, काल र सन्दर्भ वा परिस्थितिसापेक्ष विषय हो । पश्चिममा गोराको सापेक्षतामा काला, क्रिश्चियनका सापेक्षतामा मुस्लिम, दक्षिण एसियाली देशका हिन्दुका सापेक्षतामा अन्य धर्मावलम्बी, सुगमका तुलनामा दुर्गम, जातीय हिसाबले माथिल्लो जातका तुलनामा तल्लो जात र वर्गीय हिसाबले उच्च वर्गका तुलनामा निम्न वर्ग सधैँ सबाल्टर्नका रुपमा रहेको देखिन्छ ।
इटालेली नवमाक्र्सवादी चिन्तक एन्टोनिया ग्राम्चीले निम्न र सर्वहारा वर्गका लागि सबाल्टर्न शब्दको प्रयोग गरेका हुन् । उनले समाजको अध्ययनका क्रममा प्रभुत्वको सन्दर्भबाट सबाल्टर्नलाई हेरेका छन् । सबाल्टर्नको इतिहास मह¤वपूर्ण छ, तर सम्भ्रान्तहरुको दमनका कारण त्यो छरिएर रहेको छ । अहिलेको इतिहास एकल, पूर्वाग्रही र असमावेशी छ । त्यसैले, इतिहास तलबाट सुरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनको छ । सबाल्टर्न अध्ययन इतिहासका पानाबाट पाखा पारिएका सीमान्त वर्गका मानिसको आफ्नै इतिहास लेख्ने उद्देश्यले सन् १९८२ देखि अभियानका रुपमा चलेको हो । इतिहासविद् रञ्जित गुहाको नेतृत्वमा यस अध्ययन समूहको निर्माण भएको हो । यसले सबाल्टर्नबारेका एक दर्जन कृतिको प्रकाशन गरेको छ । दक्षिण एसियाली सबाल्टर्नको इतिहास लेखनबाट यो अभियान सुरू भएको हो ।
एडवार्ड सइद, गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकजस्ता समाजवादी लेखक तथा आलोचक यसमा संलग्न छन् । ल्याटिन अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकहरुमा सबाल्टर्नको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ । परम्परागत इतिहासका शासित, सर्वसाधारण तथा सीमान्तीकृतलाई कुनै स्थान दिइएको छैन । प्रभुत्वशाली वर्गले अधीनस्थ वर्ग वा सबाल्टर्नलाई अनेक जाल रचेर सधैँ दबाइरहेको हुन्छ । त्यसैले, सबाल्टर्न अध्ययन समूहले इतिहासको पुनर्लेखनलाई जोड दिन्छ । शक्ति र सत्ताको आडमा सीमान्तीकृत वर्गलाई प्रभुत्वशाली वर्गले आफूसमान हुन कहिल्यै पनि दिँदैन । वर्तमान इतिहास अभिजातहरुको इतिहास हो । सबाल्टर्न समाज निर्माणमा सक्रिय छ, तर इतिहासमा ऊ आवाजविहीन र पहिचानविहीन छ । सबाल्टर्न इतिहास पुनर्लेखनको प्रश्न पनि हो ।
सबाल्टर्न अध्ययनको पद्धति मूलरुपमा दुई चरणमा विकसित भएको देखिन्छ । यसले पहिलो चरणमा अप्रतिनिधित्वमा सबाल्टर्नको खोजी गर्छ । जहाँ सबाल्र्टनको उपस्थिति नै छैन त्यस्तो रचना सबाल्टर्नका दृष्टिले अप्रतिनिधित्वको संरचना हो । यस्ता रचना सबाल्टर्नप्रति कस्तो उपेक्षा गरिएको छ ? सबाल्टर्नका आवाजलाई कसरी दबाइएको छ ? भन्ने कुराको खोजी हुन्छ । सबाल्टर्न अध्ययनको दोस्रो चरण प्रतिनिधित्वको संरचनामा सबाल्टर्न हो । यसमा सबाल्टर्नहरु को हुन् ? तिनको प्रतिनिधित्व र पहिचानको अवस्था कस्तो छ ? सबाल्टर्नको आवाज कसले बोलेको छ ? के सबाल्टर्न आफैँ बोलेका छन् ? स्रष्टा वा गैरसबाल्टर्नले सबाल्टर्नका पक्षमा बोलेका छन् ? सबाल्टर्नको शक्ति र सत्तासँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? प्रभुत्वशाली संस्कृतिको प्रभाव सबाल्टर्नमा कस्तो छ ? सहमति, सम्झौताबाट कसरी सबाल्टर्नले प्रभुत्वशाली वर्गको संस्कृतिलाई आत्मसात् गरेको छ र शक्तिका अगाडि कुन रुपमा समर्पित छ ? सबाल्टर्नमा स्वाधीनताका निमित्त प्रतिरोधी चेतना विकसित भएको छ ? भएको छ भने त्यसको अवस्था कस्तो छ ? समग्रमा सबाल्टर्न चेतनाका दृष्टिले कृति कस्तो छ ? भन्ने कुराको अध्ययन गरिन्छ । यसरी सबाल्टर्न उपेक्षित वर्ग वा पात्रका कोणबाट साहित्यको अध्ययन गर्ने पद्धतिका रुपमा विकसित भएको पाइन्छ ।
३. लाहुरी भैँसी कथाको विषयवस्तु र सबाल्टर्न
लाहुुरी भैँसी सबाल्टर्नमैत्री कथाका रुपमा रहेको छ । कथाको आरम्भमै यसको सङ्केत पाउन सकिन्छ । सबाल्टर्न पात्र लुखुरेसँगका विषय प्रसङ्ग, घटनाले सबाल्टर्नको प्रतिनिधित्व गराएको पाइन्छ । कथाकारले नेपाली ग्रामीण समाजमा शोषक वर्गले सबाल्टर्न वर्गका मानिसप्रति गर्ने उत्पीडनकारी र हेय व्यवहारलाई निकै प्रभावकारी भाषाशैलीमा उद्घाटित गरेका छन् । यस दृष्टिले हेर्दा कथाकारले कथामा सबाल्टर्नको अवस्था र स्थितिलाई पहिचान गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
कथाअनुसार सबाल्टर्न पात्र लुखुरेले लाहुरी भैँसी किनेर ल्याउँछ । गाउँको उच्च वर्गीय पात्र द्वारेबालाई उसको भैँसी निकै राम्रो लाग्छ । लुखुरको घरमा लाहुरी भैँसी आएकोमा सबै खुसी हुन्छन् । भैँसीको आम्दानीले आफ्ना चाहना पूरा गर्ने सपना लुखुरेको परिवारले देखेको छ । द्वारेबाले पनि भैँसी ल्याउन खोजेको तर नसकेको र लुखुरेले आफ्नै अगाडि लाहुरी भैँसी ल्याएको देखेर द्वारेबाको मनमा ईष्र्याको आगो बल्न थाल्छ । भैँसी जाँच गरेजस्तो गरेर उसले भैँसीलाई धम्की भएको अड्कल लगाउँछ । सत्य कुरा नबुझी लुखुरे अत्तालिन पुग्छ ।
द्वारेबाले लुखुरेबाट भैँसी फुत्काउने अनेक षड्यन्त्र गर्न थाल्छ र उसका चम्चेहरुलाई प्रयोग गरी लुखुरेले हालेको मूल्यभन्दा पनि कममा भैँसी हात पार्न सफल हुन्छ ।
निम्न वर्गीय लुखुरे द्वारेबाजस्ता शोषकको जालमा परी निराशापूर्ण अवस्थामा पुगेर यो कथा समाप्त भएको छ ।
३.१ लाहुरी भैँसी कथामा सबाल्टर्न चेतना
लाहुरी भैँसी कथा सबाल्टर्नका दृष्टिले प्रतिनिधि कथा हो । यसमा प्रस्तुत भएका सबाल्टर्न पात्रहरुमा लुखुरे, उसकी श्रीमती घैँटी, उसको छोरो, रामबिरे, घमाने, कान्छी घर्तिनीजस्ता पात्र वर्गीय, जातीय दृष्टिले सबाल्टर्न पात्रका रुपमा देखिएका छन् भने लुखुरेकी श्रीमती लैङ्गिक दृष्टिले समेत सबाल्टर्न चरित्रका रुपमा उपस्थित भएकी छे । प्रस्तुत कथामा प्रभुत्वशाली पात्रका रुपमा द्वारेबा, बाउँठे ढकाल, नेपाल पण्डितजस्ता पात्र रहेका छन् । सबाल्टर्नका रुपमा रहे पनि घमाने र रामबिरेले प्रभुत्वशाली वर्गकै आवाजलाई समर्थन गरेका छन् । प्रभुत्वशाली वर्गले केही नभएको असल भैँसीलाई धम्की भएको षड्यन्त्र रची बिचरा लुखुरेलाई जालमा पारेर उसको अवस्थालाई झनै नाजुक बनाउने काम गरेका छन् ।
यस कथामा सबाल्टर्नको पहिचान वर्गगत परिस्थिति र वर्गीय उत्पीडनका चित्रणबाट गर्न सकिन्छ । लुखुरेले गरिब भएका कारण जुनप्रकारको उत्पीडन भोगेको छ त्यो वर्गीय विभेदका कारणले हुन पुगेको देखिन्छ । पहिचानमा सबाल्टर्न भए पनि व्यवहारमा कतिपय पात्रको चरित्रले प्रभुत्वशाली वर्गसँग सम्बन्ध राखेको कथामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । कथाको यस अंशले प्रभुत्वशाली वर्गले सबाल्टर्नलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ :
“लुखे बजियाले भैँसी ल्याएछ ?”– द्वारेबाले घोर आश्चर्यको स्वरमा भने, मानौँ लुखुरेले भैँसी ल्याएको कुरा उनी सपनामा पनि पत्याउन सक्तैनन् । साँच्चै नै उसले भैँसी ल्याएको हो भने योजत्तिको घोर आश्चर्य र घोर अपराध अरु केही हुन सक्तैन । आफूले एउटा भन्याजस्तो लाहुरी जम्का गर्दागर्दै छेपारोको उखान भैरहेछ, लुखुरे नाथुले भैँसी ल्याउने ! यो कसरी हुन सक्छ ? उनलाई यो आफ्नो द्वारेपनाको निमित्त एउटा थप्पडझैँ लाग्यो । उनले मनमा असजिलोपनाको अनुभव गरे, भित्र अलि चस्केझैँ, भित्र मुटुमा कसैले फोनबाजको सियोले च्यास्स घोचिदिएझैँ उनलाई लाग्यो । (पृ. २९)
कथाको यस अंशमा सबाल्टर्न वर्गको उन्नति प्रभुत्वशाली वर्गले देखिसहन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । शक्तिका केन्द्रमा आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले सम्पन्न वर्ग÷व्यक्तिको प्रभुत्वलाई यस कथाले देखाएको छ । द्वारेबाले आर्थिक र सामाजिक बलका आधारमा गाउँका सबैलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ । सबैले गलत नै भए पनि उसैको कुराको समर्थन गरेका छन् । निम्न वर्गीय पात्र लुखुरेले निर्दोषी लाहुरी भैँसी ल्याए पनि द्वारेबाले त्यसमा अनावश्यक धम्की भएको खोट देखाएर भैँसीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न षड्यन्त्र भएको कुरा कथाले देखाएको छ । शक्तिशाली वर्गले सबाल्टर्नलाई जालमा पारेर कसरी शोषण गर्छ भन्ने कुरालाई कथाको यस अंशबाट राम्रोसँग देखाइएको छ :
“भैँसीलाई त अलि बढी नै हालिछस् । दूध कति देला ? कल्चौँडा मात्र भएर के गर्नु, मासु खान भएन मोटो छ भनेर !” उनका आँखा र नाक अलि खुम्चिए । लखुरेको सातो उडिगो ।
“किन र बा ?” उसले सशङ्कित र भयभीत आँखाले द्वारेको आँखा र नाक हे¥यो । त्यहाँ उसले कुनै किसिमको विकार पहिल्याउन सकेन । किनभने, द्वारेको मनको सम्पूर्ण कुटिलता आएर उनको घोप्टे जँुगाभित्र लुकेको ओठमा फर्फराइरहेको थियो । अब द्वारेबाले उसको शङ्काले फुस्रिएका आँखामा गहिरोसँग हेरे, अनि एकपटक फेरि जाँच्ने कष्ट उठाए । उनले लाहुरीको चारैतिर घुमेर जाँचे, अनि अन्त्यमा बडो गम्भीर भएर हुन सकेसम्मको सहानुभूति स्वरमा छरे– “बाबै, भैँसी त धम्की छ, कसो ए रामे, हेर् त, कि मैले जानिनँ ?” (पृ. २८) ।
यसबाट ग्रामीण समाजमा निम्न वर्गमाथि उच्च वर्गकाले षड्यन्त्र गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ । निम्न वर्गीय पात्र लुखुरेको लाहुरी भैँसीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न षड्यन्त्र गरेका द्वारेबालाई निम्न वर्गकै पात्र रामबिरे घर्तीले भरमग्दुर सघाएको छ । “यसको भैँसी खोटी रहेनछ रे भने त हाम्रा मुखाँ अभच्छे हालिदिनु” (पृ. ३३) जस्ता संवादले यसैलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
कथामा प्रभुत्वशाली वर्गसँग सबाल्टर्नको सम्बन्ध सहमति र सम्झौताबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । प्रभुत्वशाली द्वारेबाजस्ता चरित्रको जालमा परेर सबाल्टर्न उसकै विचारमा सहमत हुन बाध्य भएको अवस्था यस कथामा चित्रण भएको छ । कथाको यस अंशले यस कुरालाई पुष्टिसमेत गर्दछ :
“क्यार्छस् त बाबै, तेरा बुद्धिले त हो, हामीले गरे, हाम्रा सल्लाहले होइन । हामीलाई के भन्छस् !”– द्वारे बूढा ज्यादै कठोर देखिन्थे । लुखुरेको मन भरिएर आयो । “बा, मैले आफ्नै बुद्धिले घुँडामा बन्चरो हानेँ ! अब के गरौँ बा ? स्वास्नीको नाक, कानको त भला केही थिएन, भर्सेला परोस् भनौँ, नेपाल बाहुनको दुई सय पचास रिन कहाँबाट तिराँै ? हे ईसोर ! अब म के गरौँ !”– लुखुरेको स्वर साँच्चै वेदनाको भारले धरमराएझँै काँपिरहेको थियो । पृृ. ३१)
“अब अरु त जुक्ति नै छैन बाबै”– रामबिरे एक कुनाबाट बोल्यो । “अब त्यै सिनु लगेर फिर्ता दिएमात्र हो ।” “बा, म त बितो । अब के गरौँ बा ? म त खौलाँ परो ।”– लुखुरे बगरको माछाजस्तै छटपटायो । “आ, द्वारेबा, अब त्यसो होइन, लुखुरे बौरा गाउँको गरिब हो, च्यापोमा परिगो, अब तपाईंले विचार नगरे कसले गर्छ यसको विचार ?”( पृ. ३२)
प्रभुत्वशाली वर्गको अगाडि सबाल्टर्न लुखुरेको केही लागेको देखिँदैन । ऊ विवश भएर आफ्नो लाहुरी भैँसी द्वारेबालाई नै जिम्मा लगाउन पुग्छ । लुखुरेलाई आफ्नो जालमा फसाउन सकिएकोमा द्वारेबा पनि भित्रभित्र निकै खुसी भएको देखिन्छ ।
यस कथामा सबाल्टर्नले आफ्नो स्वतन्त्रता र खुसीका लागि प्रतिरोधी चेतनाको विकास त गरेको छ । तर, उसको प्रतिरोधी चेतनाको आवाज भने निकै मधुरो हुन पुगेको छ । आफूमा आइपरेको दुःख टार्न सबाल्टर्न ईश्वरको पुकार गर्नुबाहेक अर्को कुनै विेकल्प नरहेको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । कथाका यी अंशले सबाल्टर्नमा केही प्रतिरोधी चेतना छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ :
“असत्ती काठो ! भोलि नै लगेर त्यसको डिङ्गो त्यसैको दैलोमा मिल्काइदिन्छु”– लुखुरे दुःख र पीडाले बडबडायो । “हे ईसोर ! बाउँठे काठेको भस्म खरानी भैजावस् ! गरिबलाई रूवाएर… गरिबको धनले नपोली त कहाँ छोड्ला र ! परमेसोरी ।”
यसरी सबाल्टर्नमा स्वाधीनताका निमित्त प्रतिरोधी चेतना विकसित भएको त छ, तर त्यो पूर्णरुपमा प्रभुत्वशाली वर्गको शक्तिलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने किसिमको छैन । सबाल्टर्नको मनोवादजस्तो एकाकी प्रकृतिको मात्र छ ।
लाहुरी भैँसी कथा सबाल्टर्नमैत्री कथाका रुपमा रहेको छ । यस कथामा वर्गीय आधारमा सबाल्टर्नको पहिचान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधित्वको संरचनामा सबाल्टर्नको उपस्थिति कथामा रहेको छ । प्रभुत्वशाली वर्गको अधीनमा सबाल्टर्नको प्रतिनिधित्व भएको अवस्था देखिन्छ । अनेक षड्यन्त्रपूर्वक शक्तिशाली वर्गले सबाल्टर्न वर्गलाई आफूसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाएको अवस्था कथाले दर्शाएको देखिन्छ । सबाल्टर्न बोल्न नसक्ने र प्रतिरोधी चेतना पनि निकै कमजोर रहेको स्थिति यस कथामा रहेको छ । सबाल्टर्न आफैँ वाचाल भएको अवस्था यस कथामा रहेको छैन । सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धभित्रै रहेर सबाल्टर्नको प्रतिरोधी चेतनाको विकास भएको देखिन्छ । केवल ईश्वरीय पुकारमा सबाल्टर्नको आवाज खुम्चिएको छ । सामन्ती समाजभित्र सबाल्टर्नहरु आफैँ बोल्न नसक्ने, आफूमाथिको उत्पीडनका विरूद्ध विद्रोह गर्न नसक्ने अवस्था यस कथाको लुखुरे प्रवृत्तिका मानिसका माध्ययबाट स्पष्ट पारिएको छ । प्रस्तुत कथाले सबाल्टर्नको पहिचान र अस्तित्वलाई भने स्पष्टसँग देखाएको छ ।
(लेखक वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुन् ।)